कसरी डिजिटल छवि को आकार को गणना गर्न क्रिएटिव अनलाइन
लोला करील | 18/06/2021 09:00 | ग्राफिक डिजाइन, सामान्य, ट्रिक्स
एक डिजिटल छवि को आकार गणना गाह्रो छैन। यद्यपि त्यहाँ छन् धेरै सम्बन्धित सर्तहरू डिजिटल छविहरूको साथ र कहिलेकाँही यो एक अर्को संग भ्रमित गर्न सजिलो छ। साइज कसरी गणना गर्ने भनेर जान्नु अघि, केही अवधारणाहरूको बारे स्पष्ट हुनु महत्त्वपूर्ण छ, जस्तै डिजिटल छवि वा के हो डिजिटल आकार वा तौल र शारीरिक आकार बीचको भिन्नता। यस पोष्टमा हामी ती सबै शंका समाप्त गर्न जाँदैछौं प्लस हामी तपाईंलाई एक डिजिटल छवि को आकार को गणना गर्न सिकाउँछौं यो सम्झना छैन!
1 एक डिजिटल छवि के हो
2 अवधारणाहरू जुन तपाईं डिजिटल छविहरूका बारेमा कुरा गर्दा स्पष्ट हुनुपर्दछ
2.1 रंग गहिराइ
2.3 एक डिजिटल छवि को आकार
3 कसरी डिजिटल छवि को आकार को गणना गर्न
एक डिजिटल छवि के हो
एक डिजिटल छवि छ बिट्स मार्फत छविको दुई आयामिक प्रतिनिधित्व। थोरै जानकारीको सानो इकाई हो, सामान्यतया मानिसहरू र शुन्यहरू मिलेर बनेको हुन्छ। सादा शब्दहरूमा, एक डिजिटल छवि हो धेरै र शून्य (जानकारी) जब संयुक्त छवि एक छवि उत्पन्न।
हामी यस प्रकारको छविहरू भन्छौं, बाइनरी कोडद्वारा गठन गरिएको बिटम्यापहरू। तिनीहरूलाई भनिन्छ, किनकि वास्तविकतामा पोइन्ट्स वा पिक्सेलको ठूलो संख्यामा सम्मिलित हुने परिणाम हो। वास्तवमा, यदि तपाईं कुनै एडिटिंग प्रोग्राममा जानुहुन्छ, जस्तै फोटोशप, र पर्याप्त फोटो विस्तार गर्नुहोस्, तपाईं ती पिक्सलहरू छुट्याउन सक्नुहुनेछ। प्रत्येक पिक्सेल बिट्स मिलेर बनेको हुन्छ.
अवधारणाहरू जुन तपाईं डिजिटल छविहरूका बारेमा कुरा गर्दा स्पष्ट हुनुपर्दछ
La रंग गहिराइ उनले भने बिट्सको संख्या आवश्यक छ ईन्कोड गर्न र जानकारी बचत गर्नुहोस् को बारेमा रंग प्रत्येक पिक्सेलको। उदाहरण को लागी, यदि यो १ बिट छ, केवल २ र colors्ग ईन्कोड गर्न सकिन्छ; तर यदि २ 1-बिट छ भने, १.2..24 मिलियन बिभिन्न रंगहरू भण्डारण गर्न सकिन्छ।
रंग मोड भण्डार गर्न सकिने रंग डेटाको निर्धारित अधिकतम रकम हो। उदाहरणको लागि, आरजीबी र color्ग मोडमा, कुल १ million करोड रंगहरू भण्डार गर्न सकिन्छ (२--बिट र color गहिराई), यदि हामी मोनोक्रोम मोडसँग काम गर्छौं भने, केवल दुई रंगहरू भण्डारण हुनेछ (१-बिट रंग गहराई)।
एक डिजिटल छवि को आकार
एक डिजिटल छवि को आकार l को उत्पादन को रूप मा परिभाषित छयस चित्रको चौडाईमा पिक्सेलको संख्या उच्च पिक्सेलको संख्या द्वारा। डिजिटल तस्विरको आकार, छवि तौल को रूप मा पनि चिनिन्छ, अक्सर बाइट्स, MB, वा KB मा मापन गरिन्छ शारीरिक आकारको साथ भ्रमित हुन छैन (जुन प्राय सेन्टीमिटर मापन गरिन्छ)। एउटै छवि बिभिन्न भौतिक आकारहरूमा छाप्न सकिन्छ, बिभिन्न तौलका छविहरू समान भौतिक आकारमा छाप्न सकिन्छ। के छवि को डिजिटल आकार निर्धारण यसको गुणवत्ता हो: यसको आकार ठूलो छ, त्यो यो छ, अधिक पिक्सेल, यसको गुणस्तर बढी छ। यदि हामीसँग धेरै थोरै पिक्सेलको तस्बिर बनेको छ भने क्वालिटी घटाइनेछ र ती पिक्सेलहरू देखिन सक्ने छन्।
उदाहरण को लागी, यदि म समान भौतिक आकार मा दुई अलग आकारको डिजिटल छविहरु प्रिन्ट गर्छु भने, एक भन्दा धेरै पिक्सल (छवि 1) अन्य भन्दा राम्रो देखिन्छ (छवि २)।
La डिजिटल छवि गुणवत्ता रिजोलुसनको रूपमा पनि चिनिन्छ। प्राविधिक रूपमा, रिजोलुसन भनेको पिक्सेलको घनत्व हो, जुन हो १ इन्चमा पिक्सेलको संख्या (dpi).
तार्किक, तस्विरको तौल कम, कम पिक्सेलले यसको गठन गर्नेछ र कम पिक्सेलहरू प्रत्येक इन्चमा हुनेछन्।। यसको रिजोलुसन यस्तै शारीरिक आकारमा छापिएको भारी छवि भन्दा खराब हुनेछ।
जब तपाईं के निर्धारण गर्नुहुन्छ संकल्प तपाईं २०० ppi वा p०० ppi प्रिन्ट गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, उदाहरणका लागि, तपाईं छविको डिजिटल आकार परिवर्तन गर्नुहुन्न, के तपाईं परिमार्जन भौतिक आकार हो। यदि तपाईं २०० ppi मा प्रिन्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईं कम रिजोलुसनको साथ ठूलो फोटो प्राप्त गर्नुहुनेछ। यदि तपाईं रिजोलुसन to०० मा बढाउनुहुन्छ भने, फोटो शारीरिक रूपमा सानो हुनेछ, किनकि तपाईं सोध्दै हुनुहुन्छ कि एक पिक्सेलको एक ठूलो संख्या प्रत्येक इन्चमा केन्द्रित हुनेछ, र यो प्राप्त गर्न भौतिक आकार घटाइएको छ किनकि डिजिटल आकार स्थिर रहन्छ।
गणना गर्न बाइट्समा एक डिजिटल छवि को आकार, हामी केवल गुणा गर्न छ कुल पिक्सेलको संख्या त्यो छविको स्वामित्व छ (पिक्सेल उच्च x पिक्सेल चौडा) प्रत्येक पिक्सेलको वजन द्वारा.
प्रत्येक पिक्सेलको वजन पत्ता लगाउन, तपाईंले र color मोडलाई ध्यानमा राख्नु पर्दछ। उदाहरणको लागि, यदि यो एक आरजीबी छवि हो भने, हामी के गर्छौं २ the बिट्सलाई 24 बाट विभाजित गर्छौं, किनकि १ बिट 8 बाइट बराबर हुन्छ। यदि तपाईं केबीमा आकार जान्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले परिणामलाई १०२1024 ले भाग गर्नुपर्छ।
जहाँसम्म, कम्प्युटरमा, फाईलको गुणहरू पहुँच गरेर, तपाईं कुनै समस्या बिना फोटोग्राफको आकार फेला पार्नुहुनेछ, अधिक जटिल कुरा के हो भनेर थाहा पाउँदा कुन डिजिटल फोटो प्रिन्ट गर्नुपर्दछ ताकि रिजोलुसन राम्रो छ, म तपाइँलाई एक ल्याउन truco त्यसले तपाईंको जीवन बचाउनेछ। तपाईं पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ यो अनलाइन आकार क्यालकुलेटर तपाइँको कार्यहरू प्रिन्टिंगका लागि तयार गर्न र यसलाई सुरक्षित प्ले गर्न।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » कसरी डिजिटल छवि को आकार को गणना गर्न
Tools औजारहरू पोष्टरहरू अनलाइन बनाउन